“Ny Fianakaviako no Maotera Manosika Ahy Hitsangana sy Handeha” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Aogositra 2016 6:22 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español
Luis Ángel Pérez nitondra ny fanilon'ny servisim-pokonolona. Tamin'ny tsingerintaona faha-50 ny Tiropy 168 ao amin'ny fokontany Amelia ao amin'ny kaominina Guaynabo (Nomena ny sary).
Nahazo mari-boninahitra avy amin'ny gazetiboky Careers & the Disabled avy ao Etazonia noho ny lalam-piainany amin'ny maha-mpitarika fikambanana sivika sy fokonolona azy ilay Portorikana Luis Ángel Pérez. Niasa niaraka tamin'ny ankizy sy ny tanora tao amin'ny fokontanin'i Amelia ao amin'ny kaominina Guaynabo tamin'ny alalan'ny skotisma sy ny zavakanto i Pérez.
Nandeha nankany Boston, Massachusetts niaraka tamin'i Annette vadiny sy i Marrero mpiasan'ny hetra mivantana an'i Etazonia ao Porto Rico –izay iasany sy ny sampan-draharaha nanendry azy, Careers & the Disabled, — i Perez handraisany ny loka. Ny Careers & the Disabled, dia famoahana manoka-tena manokana amin'ny mety ho fisian'asa ho an'ny sembana, ary manome loka 10 isan-taona amin'ireo mpiasam-panjakana na mpiasan'ny tsy miankina.
Niresahan'ny Global Voices ity mpitarika ara-piarahamonina lasa tsy afa-mandeha ity noho ny carjacking [fangalarana fiara an-terisetra eny an-dalana] nahazo azy.
GV: Araka ny fahazoako azy dia ianao no portorikana voalohany, sy Latino voalohany nahazo loka avy amin'ny sampan-draharaha.
LAP: Araka ny fahazoako azy dia eny, ary tamin'ny folo nahazo loka dia izaho irery no Latino.
GV: Nanao ahoana ny fahatsapanao rehefa nandray izao mari-pankasitrahana izao?
LAP: Kevoka, satria ny fankasitrahana dia avy amin'ny orinasa gazetiboky miompana manokana amin'ny olona manana fahasembanana. Misy 10,7 tapitrisa ny isan'ny olona manana fahasembanana ao Etazonia ary mahatonga ahy ho feno hafaliana izany hoe voafidy ao anatin'izany olona maro dia maro izany.
GV: Tsy isalasalana fa nanokatra faravodilanitra vaovao ho anao eo amin'ny sehatra arakasa izao fankasitrahana anao izao…
LAP: Tsy arakasa ihany fa nanokatra faravodilanitra vaovao ara-piarahamonina ihany koa.
GV: Iza koa no tianao hampitana izany fankasitrahana izany?
LAP: Amin'ny fianakaviako, izay maotera nanosika ahy isa-maraina hiarina sy handeha. Ho an'ireo namana izao teo foana, ary ambonin'izany rehetra izany dia ho an'Andriamanitra izay nahafahako nanokatra ny maso isa-maraina ahafahana mianoka ny lokon'ny fiposahan'ny masoandro.
GV: Raha tsy maintsy mandefa hafatra ho an'ny olona hafa izay manana fahasembanana ianao, dia inona no holazainao?
LAP: Ábranse al servicio, sirva a su hermano, sirva a un desconocido, pero sirva: “porque el servicio es la renta que pagamos por vivir en el planeta”.
LAP: Sokafy ny servisy (fikarakarana) , mikarakara ny rahalahiny, mikarakara vahiny, ary mikarakara “satria ny fikarakarana no hofantrano aloantsika ahafahana miaina amin'ity planeta ity.”